Muxuu waxtar ama liidasho reebay Baarlamaanka Puntland ee xasaanaddu ka dhammaanayso (warbixinta 2aad)? (dhegayso) – Radio Daljir
Muxuu waxtar ama liidasho reebay Baarlamaanka Puntland ee xasaanaddu ka dhammaanayso (warbixinta 2aad)? (dhegayso)
Seteembar 16, 2018 1:33 b 0
Intiinii dhegaysataay shalay waxaan bilawnay baahinta warbixinno xiriir ah oo ku saabsan Baarlamaanka xil-hayntoodu dhammaadka tahay iyo dhaliilihii uu lahaa iyo dhabbaha wanaagsan ee ay tahay in lagu soo xulo midka soo aaddan.
Warbixintii middaan ka horraysay waxaan uga falaanqoonay Baarlamaanka xil-hayntoodu gabbalsatay, iyo waxa uu xasuus reebay, warbixintaan oo ah tii labaad waxaan ugu daadageynaa sababaha loo dhaliilo Baarlamaan kasta oo Puntland soo mara iyo waxa gundhigga u ah.
Cabdifataax Cumar Geeddi ayaa inoo diyaarshay, inoona soo jeedinaya.
Muxuu waxtar ama liidasho reebay Baarlamaanka Puntland ee xasaanaddu ka dhammaanayso (warbixinta 1aad)? (dhegayso)
ARDAA 112 Siyaasadda & Dhaqaalaha 478 Wararka 20385